एक प्रकाशकको पत्रकारिता सपना
एजी सुल्जबर्गर शनिवार, पुस २२, २०७४ 1094 पटक पढिएको
टाइम्सका पूर्व मालिक एडोल्फ अक्स र टाइम्स कार्यालय।
न्यु योर्क टाइम्सका पूर्व मालिक एडोल्फ अक्सका खनाति ३७ वर्षीय एजी सुल्जबर्गरले टाइम्सको नयाँ प्रकाशकको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। प्रकाशकको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनले पत्रिकाको प्रकाशकीयमार्फत आफ्ना सपनाहरू सार्वजनिक गरेका छन्। आफ्ना पूर्वजले कसरी टाइम्स किने र हालसम्मको पत्रकारिता अभ्यासमा टाइम्सले के पायो ? रविराज बरालले टाइम्सको उक्त प्रकाशकीयको भावानुवाद गरेका छन् ।
मेरा पूर्वज (हजुरबाका हजुरबा) ले सन् १८९६ मा आफ्नो पुर्ख्यौली थलो चटनुगा छोडेर न्युयोर्कको सानो र मुस्किलले चलिरहेको एउटा पत्रिका खरिद गरेका थिए।
उक्त क्षण अहिलेको हाम्रो अवस्थाभन्दा भिन्न थिएन। प्राविधिक, आर्थिक तथा सामाजिक उथलपुथलले मुलुकको परम्परामा व्यापक हलचल ल्याइदिएको थियो। यी परिवर्तन र तिनले ल्याएका प्रभावहरू बुझ्ने कोसिस गर्ने मानिसहरू पनि ध्रुवीकृत राजनीतिले अलमलमा थिए। दलगत रूपमा विभाजित प्रेसजगत् नागरिकलाई सुसूचित गर्नुभन्दा आफ्नै स्वार्थपूर्तिमा बढी केन्द्रित थियो।
यो पृष्ठभूमिमा एडोल्फ अक्सले एउटा भिन्न खालको पत्रिकाको आवश्यकता देखे र ‘न्युयोर्क टाइम्स’लाई उनले त्यति बेलाको प्रगतिशील अवधारणाका रूपमा समर्पित गरे, जसले आज पनि उत्साहित गर्छ। टाइम्सलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, उच्च मर्यादित पत्रकारिता तथा सार्वजनिक कल्याणका लागि समर्पित बनाउने उनले वाचा गरेका थिए।
समाचारप्रति उनको दृष्टिकोण थियो, ‘दल, सम्प्रदाय र स्वार्थको पर्वाह नगरी, कुनै भय वा पक्षपातबिना, निष्पक्षतापूर्वक समाचार दिने।’ विचारप्रति उनको दृष्टिकोण थियो, ‘सबै खालका विचार भएका बौद्धिक विमर्शहरूलाई स्वागत गर्ने।’
न्युयोर्क टाइम्सको प्रकाशकका रूपमा काम सुरु गर्दैगर्दा मलाई उक्त मिसन आज पनि अत्यावश्यक अनुभव भइरहेको छ। हाम्रो समाजलाई राजनीतिक, प्राविधिक तथा पर्यावरणीय शक्तिहरूले नयाँ आकार दिइरहेका छन्, जसले गहन अनुसन्धान र सचेत व्याख्याको माग गर्छ। यी पृष्ठहरूमा एडोल्फ अक्सको परिकल्पना प्रकाशित भएको एक सय २० वर्षपछि स्वतन्त्र, साहसी र विश्वसनीय पत्रकारिताको अवश्यकता विगतभन्दा झन् टड्कारो भएको छ।
सञ्चारको नयाँ माध्यम क्लिकको प्रतिस्पर्धामा लागिरहेका बेला गलत सूचनाहरूको बाढी आएको छ, मिडियाको विश्वसनीयता घटिरहेको छ, वास्तविक पत्रकारितामाथि हल्ला र प्रोपोगान्डा हावी भइरहेको छ।
यो टाइम्सका लागि रोमाञ्चक अन्वेषण र विकासको समय हो। हाम्रा संवाददाताहरू विगतभन्दा सबल भएका छन्। अन्तरक्रियात्मक ग्राफिक्स, पोडकास्टिङ, डिजिटल भिडियोजस्ता पत्रकारिताका नयाँ रूपहरू तथा खोज पत्रकारिता, अन्तर्राष्ट्रिय समाचार र बिट रिपोर्टिङमा भएको ठूलो लगानीलाई यसको श्रेय जान्छ। हाम्रा पाठक जो कुनै बेला एउटा सहरमा सीमित हुन्थे, उनीहरू अहिले दुनियाँभर फैलिएका छन्।
आफ्ना बाबुसमेत रहेका टाइम्सका अध्यक्ष आर्थर अक्स सुल्जबर्गर जुनियरसँग एजी सुल्जबर्गर। फोटो : न्यु योर्क टाइम्स
टाइम्सका लागि, अझ व्यापक रूपमा भन्दा समाचारमाध्यमका लागि र पत्रकारिताले स्वस्थ समाज निर्माण गर्छ भनेर विश्वास गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिका लागि निश्चित रूपमा यो गहन चुनौतीको अवधि पनि हो।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई हाम्रा मौलिक अधिकारहरूमध्ये सबैभन्दा अगाडि राख्नुको एउटा कारण थियो। निर्भयतापूर्वक विचारहरूको आदानप्रदान र शक्तिसीनहरूलाई जवाफदेही बनाउनसक्ने क्षमता एउटा सफल लोकतन्त्रको पूर्वसर्त रहेको हाम्रा संस्थापकहरूले बुझेका थिए। तर, शक्तिहरूको एउटा खतरनाक मिलीभगतले नागरिकलाई उनीहरू आसपासको विश्व बुझ्न र त्यसमा संलग्न हुन सघाउने प्रेसको आधारभूत भूमिकालाई नै चुनौती दिइरहेको छ।
कडा मेहनतसाथ गरिने खर्चिलो तर मौलिक रिपोर्टिङ आज हराउँदैछ। सबैखाले सञ्चारमाध्यम रिपोर्टिङ स्टाफ कटौती गर्न र आफ्ना महत्वाकांक्षालाई मार्न बाध्य छन्। सञ्चारको नयाँ माध्यम क्लिकको प्रतिस्पर्धामा लागिरहेका बेला गलत सूचनाहरूको बाढी आएको छ, मिडियाको विश्वसनीयता घटिरहेको छ, वास्तविक पत्रकारितामाथि हल्ला र प्रोपोगान्डा हावी भइरहेको छ र राजनीतिज्ञहरूले प्रेसमाथि सन्देहमात्र गरिरहेका छैनन्, त्यसलाई भड्काउने सुविधा पनि पाएका छन्। समाजलाई एकआपसमा जोड्ने आमसत्यको आधारभूत अवधारणालाई नै बढ्दो ध्रुवीकरणले खतरामा पारिरहेको छ।
टाइम्समा हाम्रा पूर्वजहरूजस्तै मेरा सहकर्मीहरू र म यस्ता शक्तिहरूका अगाडि झुक्नेछैनौं।
टाइम्सले उत्सुकता, साहस र सहानुभूतिपूर्वक हाम्रो युगका सबैभन्दा महत्वपूर्ण समाचारहरूको खोजीलाई निरन्तरता दिनेछ किनभने विश्वको अवस्थामा सुधार यसलाई बुझेर मात्र सुरु हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वास गर्छौं। टाइम्सले विचार र अनुभवहरूको आवाजलाई मुखरित गर्दै ध्रुवीकरणको प्रतिरोधलाई निरन्तरता दिनेछ, किनभने पत्रकारिताले नागरिकहरूलाई आफ्नो बारेमा आफैं सोच्नसक्ने बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास गर्छौं। टाइम्सले आफंैलाई स्वतन्त्रता, दृढता र निष्पक्षताको उच्च मापदण्डमा राख्नेछ किनभने विश्वसनीयता नै हामीसँग रहेको सबैभन्दा अनमोल सम्पत्ति हो भन्नेमा हामी विश्वास गर्छौं। टाइम्सले बिनापक्षपात तथा निर्भयपूर्वक यी सम्पूर्ण काम गर्नेछ किनभने सत्यलाई पछ्याउँदा जहाँसुकै पुगियोस्, पछ्याउन छोड्नुहुन्न भन्नेमा हामी विश्वास गर्छौं।
यी मूल्यहरूले मेरा पिता तथा उनका पूर्वजहरूलाई प्रकाशकका रूपमा निर्देशित गरे जतिबेला युद्ध, आर्थिक संकट, प्राविधिक उथलपुथल र ठूलाठूला सामाजिक परिवर्तनका बीच उनीहरूले यो कम्पनीलाई अगाडि बढाए। राष्ट्रपतिसँग उभिँदा होस् वा स्वतन्त्र प्रेसका लागि अदालतमा संघर्ष गर्दा वा हाम्रो व्यवसायको वित्तीय स्वार्थलाई कुल्चिएर हाम्रो पत्रकारिताको सिद्धान्तको पक्ष लिँदा होस्, यिनै मूल्य तथा मान्यताहरूले उनीहरूलाई जोगाइरहे।
टाइम्समार्फत यी मूल्य मान्यता रक्षाको सुनिश्चितता गर्नु र सँगसँगै बदलिँदो दुनियाँ अनुकूलका तौरतरिका अँगाल्नु मेरा अगाडिको चुनौती हो। मैले मेरो करिअरको अधिकांश समय पत्रिकाको सम्वाददाताका रुपमा बिताएको छु तर यसको डिजिटल विकासमा पनि मैले उति नै समय खर्चेको छु। म हाम्रा उत्तम परम्पराहरूको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु साथै म भविष्यप्रति उत्साही र आशावादी छु।
अगाडिका वर्षहरूमा धेरै परिवर्तन हुनेछन्। र, म विश्वास गर्छु कि ती परिवर्तनहरूले यस्ता समाचार सामग्री दिनेछन् जुन हामीले लेख्ने वा छाप्ने सपना देखेभन्दा रोचक र जीवन्त हुनेछन्। केचाहिँ परिवर्तन हुनेछैन भने, हामी संवाददाताहरूलाई महिनौंसम्म एउटै समाचारको खोजीका लागि स्रोत उपलब्ध गराइरहनेछौं। हामी विश्वका जुनसुकै कुनाबाट प्रत्यक्षदर्शीका रूपमा घटनाहरूको रिपोर्टिङ गर्न र कहिलेकाहीँ ठूला चुनौती मोलेर घटनाको खुलासा गर्न संवाददाताहरूलाई निरन्तर सहयोग गर्नेछौं। हामी हाम्रो पत्रकारितामा विज्ञहरूको प्रवेशलाई निरन्तरता दिनेछौं र वकिलहरूबाट कानुनको, डाक्टरहरूबाट स्वास्थ्यको र पूर्वसैनिकहरूबाट युद्धको कभरेज गर्नेछौं। हामी समाचार सामग्रीको प्रस्तुतिका लागि लेखनदेखि भर्चुअल रियालिटी र अन्य सशक्त तरिकाहरूको खोजीलाई निरन्तरता दिनेछौं। यी सबैभन्दा माथि, हामीले प्रकाशित गर्ने सम्पूर्ण सामग्रीमा सत्यता र निष्पक्षतालाई निरन्तरता दिनेछौं। र, अप्ठ्यारा क्षणहरूमा कमजोरी तथा गल्तीहरूको स्वीकारोक्तिलाई हामी निरन्तरता दिनेछौं र राम्रो गर्ने कोसिस गर्नेछौं।
हाम्रो विश्वलाई आवश्यक पत्रकारिता यस्तै हो र हाम्रा पाठकहरू पनि यही चाहन्छन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ। एक सय २० वर्षभन्दा बढी र पाँच पुस्तादेखि न्युयोर्क टाइम्सको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त यही हो। आज हामी त्यही प्रतिबद्धता नवीकरण गर्न चाहन्छौं।
कांग्रेसमा वस्तुगत समीक्षा 595
नेपालीको विरोधपछि सिमानामा पिलर गाड्न रोकियो 197
नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा दिउँसै सवारी रोकिने 292
अब किशोर अवस्था १० देखि २४ वर्षसम्म ! 369